Azonao atao ny mitondra fiovana ary zava-dehibe ny safidinao! : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 June 2019	• 12 Comments
Matetika rehefa manomboka resadresaka amin'ny olona izay manomboka mahatsapa fa ny tontolo izay lazain'ny haino aman-jery sy ny politikany amintsika dia mifototra tanteraka amin'ny fihomehezana sy ny famitahana, tsy dia misy fanantenana loatra ny fanehoan-kevitra ary ao anatin'ny "tsy afaka manao na inona na inona momba izany ianao" manao ". Hitako foana izany famaranana mahaliana izany. Nahoana ianao no tsy afaka manao na inona na inona momba izany? Sa ve isika satria mipetraka any Holandy miaraka amin'ny olona 18 tapitrisa eto amin'ity tontolon'ny kely ity na satria efa ho ny 8 miliara izao tontolo izao?
Ampio ny isan'ireo olona mamaritra ny sary any Holandy? Ireo dia mpilalao sarimihetsika marobe izay milalao ny lalao havia, havanana, maitso, volomparasy, malalaka sy fanoherana ary manampahaizana manohina vetivety ao amin'ny haino aman-jery (toy ny mpamaky ny vaovao, mpanoratra ny Telegraaf (sy ny gazety hafa) Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk ary nanonona ny lisitr'ireo mpanao propagandista matihanina be karama). Izany dia klioba kely.
Ny zavatra ataonay dia ny antsoiko hoe 'rafitra' fotsiny. Ny rafitra dia ny asa radar izay ahafahan'ny radara rehetra mamorona ny famantaranandro manontolo. Ny rafitry ny lalàna, fitsipika ary hetra sy mpanara-maso ny lalàna, fitsipika ary hetra rehetra. Ary avy eo ianao manana ny rafi-pampianarana sy mpampiofana ary ny zavatra rehetra ianaran'ny olombelona hiasa amin'ny rafitra.
Ny antony tsy ahafahantsika (na: manahoana) ny rafitra sy ny antony tsy ahasahantsika manalavitra izany isan-jaton'ireo mpandainga matihanina amin'ny toerany na farafaharatsiny hamela antsika hahafantatra fa vita amin'ny azy ireo, satria isika jereo fa misy hadisoana maro, nefa miankina amin'ny rafitra iray ihany. Firy ny olona miasa ao amin'ny birao lehibe rehefa mampihatra lalàna, manamarina olon-kafa na mampiofana ny taranaka manaraka. Ny hafa dia miasa amin'ny 'fanampiana' izay ahafahan'ny olona rehetra tsy afaka miasa intsony ao anatin'ilay rafitra. Raha misy olona iray ao anatin'ny rafitra manaisotra ny fampitsaharana ny solaitra, dia hosoloina vaovao io radara io.
Tsy mahalala na inona na inona afa-tsy ny "rafitra"; Tsy mahafantatra tontolo iray izay mihazakazaka tsy miankina amin'ny rafitra efa misy isika. Aiza isika no tsy manana fotodrafitrasa ho an'ny fiaran-dalamby, fiaramanidina ary fiaramanidina? Aiza isika no tsy hanana lalànan'ny fifamoivoizana, ny jiro fitifirana, ny lalàna ary ny lalàna? Ahoana no tokony handaminanao an'izao tontolo izao? Manafoana ireo fitsipika rehetra ireo? Mila manenjika karazam-piaramanidina ve isika? Ary tsy demokrasia ve ilay modely tokana izay miasa? Sa aleonao miaina ambanin'ny jadona?
Ny teboka dia tsy hoe ny fitsipika fototra dia diso; Ny teboka dia ny hoe ireo izay mihazakazaka ny lay dia mihambo ho miaina any amin'ny demokrasia, raha tsy izany dia tsy inona fa maskilin'ny fitondrana jadona izany. Mihatra eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena izany. Ankoatr'izay, ny teboka dia ny tsy fahampian-tsaintsika amin'ny politika sy ny haino aman-jery miaraka amin'ny fisian'ny fandrahonana amin'ny heloka bevava sy ny fampihorohoroana (matetika noforonina) sy ny karazan-javatra hafa rehetra, ka mahatonga antsika ho toy ny hoe mila lalàna sy fitsipika ary fepetra fiarovana bebe kokoa isika. This whirlpool of mitohy manamaivana ny tahotra ary milalao ny vahoaka amin'ny fitaka sy fitaka, dia miteraka tsikelikely ny fitondran'ny olombelona hiaina bebe kokoa amin'ny fanjakana pôlitika. Indrisy anefa fa be atao loatra ny manao sandwich, mba hahafahan'ny mofo sy ny lalao hanohy ny karamany, ka noho izany, ny ankamaroany dia mbola jamba amin'izay zavatra mitranga.
Nanoratra ny tantara antsoina hoe "ny fanoharana momba ny lava-bato" ny filozofa Plato (jereo ny sary amin'ity lahatsoratra ity). Ny olona any ambany elatry ny zohy dia voafatotra. Tsy mahafantatra afa-tsy ireo aloky ny zavatra izay mandalo ao amin'ny famirapiratry ny hazavana artificielle. Andeha ho lazaina fa isika rehetra ireo ao anaty lava-bato izay voafatotra amin'ny rafitra fantatra. Nanambara i Platon tamin'ny fanohanany fa raha nentina teo amin'ny tany ny olona, ​​dia ho voasariky ny tara-masoandro voajanahary izy ireo ka tsy afa-mihetsika noho ny fahalalahana sy ny tena endriky ny zava-drehetra (izay tsy misy afa-tsy ny rindrina) Fantaro ilay lava-bato), fa aleony tiany kokoa ny toerana misy ny rojo voafefy ao amin'ilay zohy mankany amin'ny fahafahana nananany fahafahana hanandrana.
Ireo olona ao amin'ny lava-bato dia tsy hahafantatra ny fahaiza-manaony marina noho ny fatorany. Tsy hahita ny tena fahafahana mihitsy izy ireo. Raha ny marina; Ny ankamaroany dia handao ny toerana misy ny rojo sy ny aloky ny zava-misy satria izy no itokisana. Ny ankamaroan'ny tian'ny ankamaroan'ny tontolon'ny haino aman-jery sy ny politika amin'ny masoandro.
Raha mbola manapa-kevitra ny hijanona ao anaty lava-bato isika ary hitazona ny radaran'ny rafitra mihazakazaka; raha mbola mahafa-po antsika amin'ny aloky ny zava-misy izay azontsika iainana isika (fa tsy manala ny tenantsika amin'ireo izay nafatotra ho antsika amin'ny rafitra iray izay ny lalàna sy ny fitsipika no mamorona ny rojo sy ny mofo ary ny lalao ihany no manao izany bolana eo amin'ny rindrina) dia tsy ho tanteraka mihitsy Raha mbola mifantoka foana isika raha mbola mifamatotra amin'ny rafitra ary tsy misy olona mandrisika azy handika ny rojom-bolo, dia hijanona eo ambany alokaloky ny fahaiza-manaontsika isika ary hijery tontolo iray izay miseho maivana fotsiny amin'ny zava-misy eo amin'ny rindrina.
Fotoana izao hanakanana ny radara; hanapaka ny rojo sy hampitahotra ireo mpiambina ny lava-bato eo am-baravarana mankany amin'ny tonelina. Mila ny hira any ianao mahery fo ('mety ho iray andro monja') avy amin'i David Bowie. Zavatra iray azonao atao androany izany ary zavatra iray mahakasika mivantana ny zava-misy iainanao. Rehefa voafafa amin'ny rojo ianao dia afaka miantso ny hafa eny ambonin'ny tany ary manampy amin'ny fandresena ny tahotra ny fahafahana marina. Atsipazo ireo rojo ireo ary miresaha amin'ny mpiara-belona aminao momba ny fihazonana ny rojo vy ao anatin'ny rafitra zohy. Afaka manomboka androany ianao; Ny tahotra ihany koa dia ny fahatahorana ny tsy fahampian'ny fiarovana ny zohy fantatrao izay mitazona anao. Mitsangàna ary atsipazo ny rojo ary avelao ny olona rehetra izay manandrana manakana anao sy mitazona anao ao anaty lava-bato dia miteny amin'ny teny mazava fa tsy ho andevon'ny tena zava-misy ianao ho an'ny sisa tavela amin'ny fanahinao.
Tags: fanoharana, Bowie, andro, Featured, ho an'ny, lava-bato, mahery fo, fotsiny, safidy, haino aman-jery, iray, Platon, politika, zava-misy, fiovana
10 June 2019 ao amin'ny 09: 37
Alaivo sary an-tsaina hoe ireo zavamaneno efatra avy amin'io sarimihetsika io dia mitondra ny anaran'ireo mpanao politika toa an'i Mark Rutte, mpitantana ny media tahaka an'i John de Mol, Peter R. de Vries, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek ary maro hafa. Tsy maintsy mametraka ny mason-tsivana fotsiny ianao ary hijery izay mitranga:
10 June 2019 ao amin'ny 09: 42
10 June 2019 ao amin'ny 11: 33
Ho ahy lahatsoratra tsara sy mazava!
Ny rafitra ankehitriny dia mifototra amin'ny "fahefana" ary ny "fahefana" dia mitazona ny antoko rehetra voakasik'izany.
Nahoana no "hery" amin'ny teny fanamarihana?
Ny "hery" ao amin'ny rafitra dia tsy fahefana marina, fa "hery" mifototra amin'ny tsy fahalalana, tahotra, fanararaotana ary fandringanana. Ireo izay mifehy ny rafitra ary noho izany dia manana "hery" manoloana ny vahoaka ny masera amin'ny famoronana ity tsy fahalalana, tahotra, fanararaotana sy fandringanana eo anivon'ny vahoaka ny vahoaka. Ny zanaky ny olona dia teraka tsy manana tany ary tsy maintsy mandray anjara amin'ny rafitra, lazaina fa ny rafitra dia ny tombontsoan'ny olona rehetra ... ny fiarahamonina; ny tombontsoam-bahoaka.
Tsy misy tombontsoa iombonana! Horonantsary ratra mampihoron-koditra izy io, izay nahatonga ireo rangahy, ego goavana, mpitsikiloko ary psychopaths dia nahavita nihazona ny "toerana manan-kaja". Ny Holandey dia didy jadona!
Ny fahefana marina na azo itokiana dia mifototra amin'ny fahafahana mamorona, mandray ny firindrana sy ny fandanjana. Ny tena mahira-tsaina dia afaka mamorona zavatra tsara tarehy tsara, nefa tsy mampidi-doza ny zon'ny hafa, ny zavamaniry ary ny biby.
Indrisy fa, araka ny rafitra, toa "manam-pahaizana" ny olona dia tsy manan-tsaina! Ireo vahoaka "toa marani-tsaina" ireo dia efa voafehy tsara sy nafindra tao amin'ny rafitra ary nanaparitaka ny fampielezan-kevitra sy ny fampidinana. Ireo olona ireo dia tsy mamorona na inona na inona, fa ataovy ny asany ao amin'ny rafitra, izay tsy misy toerana ho an'ny tena faharanitan-tsaina, izay afaka maneho ny tenany amin'ny zavaboary marina ary ny toerana misy fifandanjana sy firindrana. Ohatra amin'ireo olona tsy manan'aina ireo dia mpitantana sy fotsy fotsy ... izay tsy afaka mandefitra ireo olona tena manan-tsaina ao amin'ny faritra misy azy ireo. Ny lahatsarin'ny The Incredibles (ao amin'ny lahatsoratra) dia ohatra tsara amin'izany. Mankalaza ity lahatsary mahatsikaiky ity ny olon-drehetra, fa vitsy ihany ny sahy handray ny hafatra feno ary hijery ny tenany ao amin'ny fitaratra ... raha toa ka vitany ny manilika an'izao tontolo izao noforonin'ny zana-pitenenany.
Miverina miasa rahampitso ary hanao izay tsara indrindra azonao omena ny toerana misy anao. Iza no mahalala, mety hisy fampiroboroboana! Aza mieritreritra izay tena ataonao. Raha ny marina, tsy afaka manova izao tontolo izao ianao. Ireo olona izay tsy afaka mandeha miasa dia efa voavaha ny rafitra. Ireto manaraka ireto dia mihatra amin'ireo olona ireo ihany koa: Aza manao na inona na inona, satria tsy afaka manampy azy ianao.
Raha tsy tena fantatrao ny tokony hatao, dia zarao ireo lahatsoratra amin'ity tranonkala ity ary ampio ity tranokala ity miaraka amin'ny fiat money.
10 June 2019 ao amin'ny 13: 19
Lahatsoratra tsara avy amin'i Martin ary valinteny tsara avy amin'ny mpampiasa Wage!
Maasland nanoratra hoe:
10 June 2019 ao amin'ny 14: 27
Nametraka antso marobe ianao. Saingy tsy mitombina izany
Na inona na inona eritreretinareo momba "ny boky masina", dia ho tanteraka "marina" ireo faminaniana ireo.
Raha manao nix isika, dia mitohy izany. Raha heverintsika ny hetsiky ny 100den (na na tsia ny mpanohitra) na ny olon-tsotra mba hitatitra ny fanararaotana ... .. avy eo dia mampitombo ny dingan'ny polarization ... ... izay hiteraka vokatra mitovy ihany koa: 100 % ny fiaraha-monina mifehy izay "ireo olona ambany kokoa ireo izay ambony dia tsy maintsy manompo".
Na dia mandeha any amin'ny toerana iray ao anaty trano lay miaraka amin'ny vitsivitsy aza, ary mitombo ny endriny manokana, dia tsy sarintany azo atao, satria ny vitsy an'isa toy izany dia ho voatelina amin'ny rafitra iray ihany.
Mety ve ny Fahamarinana eo ivelan'ny saintsika? Moa ve ny fototry ny iray amin'ireo boky masina ireo dia tanteraka "tanteraka", ary avy eo koa ilay faminaniana izay voasoratra momba ny vanim-potoana manaraka? Ny hany zavatra tokony hianaranao bebe kokoa dia ny fanontaniana: angamba ve misy hery avy amin'Andriamanitra izay efa nandamina io vanim-potoana io (io efôda io), izay ahitana ny tsara sy ny ratsy miseho ary avy eo mamela ny aona fanombohana tanteraka? Amin'izay fotoana izay dia miaina ao anatin'ny fotoana tena mahavariana sy mianatra isika.
Fa tiako ny mamaky sombin-taratasy iray na 6 torohevitra mahasoa avy aminao mikasika ny fomba hametrahana ny antsonao mba hiasa, ary koa tianao ny hamaky ny valin'ny valiny ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa.
10 June 2019 ao amin'ny 15: 41
Raha ny hevitro dia manan-jo hiteny ianao fa ny fikasana dia ny hahatanteraka ny faminaniana ara-pivavahana. Tsara homarihina fa ny faminanian'ny fivavahana lehibe dia mampiseho ny fitoviana ary samy hafa amin'ny antsipiriany, mba hamoronana ny duality ilaina ho an'ny tolona ilaina eo amin'ny vondron'olona.
Nanazava lahatsoratra maro aho izay inoako fa miaina amin'ny zava-misy marina isika. Ny zava-misy simba iray natsangan'ny "andriamanitra" manokana (ilay mpanorina ny simulation), dia izay mivavaka ao amin'ny vondrona miafina sy ny Fiangonana Katolika: Lucifer
Nanazava ihany koa aho fa ny fototry ny simulation dia tsy maintsy misy safidy malalaka. Raha tsy izany, ny simulation dia ho famaritana ny endriny ary ny endriny dia efa voafaritra mazava, ka tsy ho simulation izany, fa sarimihetsika fatra-marika.
Na dia izany aza, mba hamelezana ny vokatra sy hitantanana ny script (ireo faminaniana ireo), ny mpanao trano dia nametraka 'olona tsy milalao' amin'ny simulation; ireo avatars izay tarihan'Ilay izay tokony handefa ny sarimihetsika mitaingina (ireo fanahy mandray anjara ao anatin'ilay simulation mpilalao sarimihetsika) eo amin'ny làlana lehibe indrindra amin'ny script.
Eny, misy ny "andriamanitra" (mpanorina) an'io simulation io (simulation mpilalao sarimihetsika). Eny, misy ny script izay azo jerena ao amin'ireo faminaniana ary eny, misy vondrona (avatars) izay miezaka ny hahatakatra ity script ity.
Tiako homena anao ireo torohevitra mahasoa 6 izay anontanianao:
1. Ajanony ny hino any an-danitra sy ny helo (fahateraham-batana) ary mino ny zava-drehetra, ny fivavahana lehibe milaza aminao, satria ny Andriamanitra / Satana na ny lanitra / hala modely dia ny duality noforonina ho toy ny ampahany amin'ny simulation hametraka anao eo an-tanana alefaso ireo mpiambina ny soratra ary avelao ny fanahinao ho andriamanitra (ny mpanorina ny simulation); na "zanak'Andriamanitra" (ilay mpanamboatra simia amin'ny akanjon'ny ondry).
2. Miondrika eo amin'ny tena zava-misy ary mamolavola anao amin'ny fomba entin'ireo sarimiaina tsy filalaovana amin'ny alalan'ny antsoina hoe fikambanana, fa izay midika hoe 'fanaraha-maso ataon'ny mpanamboatra simulation'.
3. Fantaro ny fomba fampiasan'ireo sarin-tsarimihetsika tsy misy filalaovana ireo faminaniana avy amin'ny fivavahana rehetra mba hanatanterahana ilay soratra goavana sy hampirisihana ny fanahy (ireo mpandray anjara ao amin'ny simulation mpilalao maromaro) mba hilefitra tanteraka amin'ny "Luciferian AI" ("fiainana mandrakizay") ny fivavahana, "ny maha-tokana" ny transhumanism, ary iray ihany).
4. Mampiharihary ny sarimihetsika tsy mitongilana amin'ny sarimihetsika, fa indrindra indrindra, mamoaka ireo olona ao amin'ny fampitam-baovao sy politika izay nanolo-tena an-tsitrapo sy nanolo-tena an-tsitrapo ho an'ireo sarimihetsika mitandrina ny soratra; Miresaka momba ireo anarana fanta-daza amin'ny politika sy ny fanaovan-gazety (na ny mainstream sy ny vondrona mpanohitra mifehy izay miara-milalao ny lalao roa).
5. Atsaharo ny manolo-tena amin'ny fomba rehetra amin'ny fanompoana ny soratra masina ary milalao ny simulation arakaraka ny fitsipika ananany: mialà ao amin'ny lava-batoo ary sahy handresy ny tahotra fa raha tsy misy ny andefimandrinanao ary tsy misy ampahany amin'ny radara dia tsy mety mandeha.
6. Asio marika ara-pivavahana sy finoana amin'ny "Jeso" (na hery avy any ivelany izay "tonga hamonjy anao") ary hahita fa eo an-tsorok'izay fanapahan-kevitrao ianao. Raha hitanao fa ny lalànan'ny safidy malalaka dia tsy maintsy mampihatra foana, dia ho hitanao ihany koa fa ny safidy rehetra ataonao (izay manalavitra ny tari-dàlana amin'ny script) dia manampy amin'ny fitarihana ny vokatra farany ary manampy ny lisansa Rosiana vokatra farany.
Raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany momba izay asehoko etsy ambony, vakio ity lahatsoratra ity: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-is-kinderlijk-eenvoudig-om-de-toekomst-te-voorspellen-als-je-het-script-doorziet-wordt-een-nostradamus/
Na vakio ny lahatsoratra eo ambanin'ny sakafo eo ambanin'ny lohateny hoe 'simulation' ary manomboka amin'ny pejy 2 ary avy eo manohy mamaky hatramin'ny farany.
11 June 2019 ao amin'ny 21: 53
Famakafakana tsara sy famintinana ny fototry ny lahatsoratra rehetra izay nosoratanao tato anatin'ny taona vitsy. Amin'ny fikarohana ataoko dia tonga amin'ny famaranana mitovy ihany aho. Tanjona mendri-kaja fa 'eo amin'ny androm-piainantsika' dia tsy hiova io script io (ampy) (fohy loatra ny fiainana). Mety nambolena ireo voany ary mety hivoaka amin'ny taona maromaro izy ireo ary mety hisy zavatra hitranga .. Angamba, satria ny lamasinina ao amin'ny script dia mandrobona ary noho izany dia tsy mety hipoitra ny voany. Mety ho tombony ve izany satria tsy mahatsiaro ny fahatsiarovana azy ireo?
Mandritra izany fotoana izany, mieritreritra aho fa tokony hiantoka ny 'Fanahy' anao ianao. Satria (araka ny fikarohana nataoko), ny fahafatesana dia tsy midika hoe "milalao". Na dia aorian'ny fahafatesanao aza, ny safidinao maimaim-poana dia hotsapaina ary hiezaka izy ireo hamela anao hisafidy. Tahaka ny amin'ny 'lalao'. Raha mamela ny tenanao ho voafitaka ianao ary manao safidy ratsy, dia ho voafafa ny 'fitadidianao' ary hiverina indray ao amin'ny 'nofo' ianao.
Amin'ny voalohany dia tsy ny 'nofo' isika. Miara-miasa izahay mba hahatongavana amin'io simulation io ary avy eo isika (any amin'ny faritra rehetra) dia mifototra amin'ny simulation. Raha 'lalàna manerantany' ny 'safidy malalaka', dia nahazo alalana isika ny hilalao ny 'lalao' (na dia eo aza ny fepetra diso). Ny antony mahatonga antsika handresy lahatra ny hilalao ity kilalao ity dia resaka hafa.
Noho izany, ankehitriny ny faniratsika antsika (tsirairay) aorian'ny fahafatesana dia tsy mamerina indray ny safidin-tsoa amin'ny anaran'ny 'safidy malalaka'. Satria raha manao safidy miaraka amin'ny 'safidy malalaka' ianao (amin'ny fandresen-dahatra azy amin'ny alàlan'ny fepetra diso), dia toy izany koa ny 'safidy malalaka', na tso-po na tsia, tsy misy dikany izany. Ary izany indrindra no fomba nanorenana ny 'safidy malalaka'.
Moa ve tsy fotoana (afa-tsy ny tsy tafiditra ao amin'ny script ao amin'ny simulation (araka izay azo atao)) mba hifantohana amin'ny tsy hiverina amin'ny simulation indray aorian'ny fahafatesanao? 'Game over' -> 'Player Up, One More Game'.
Raha tsy afaka mahazo ny 'lalao' ianao, tsara kokoa ve ny mianatra ny fomba hampijanonana azy io? Indrindra raha ny tanjona dia ny mitazona anao hatrany amin'ny lalao (Singularity / Transhumanism) ary miezaka izy ireo tsy hanome safidy anao hamela ny 'lalao'?
Tiako ho fantatra ny fahitanao an'ity.
12 June 2019 ao amin'ny 00: 56
Heveriko fa io no famintinana tsara indrindra hatramin'izay!
Noho izany dia manaiky ny 100% aho.
10 June 2019 ao amin'ny 15: 54
Tsy manohina ny hevitra manan-danja amin'ny fampitahana amin'ny fanoharana momba ny zohy. Ireo izay nahita ny endrika marina sy mahazatra ny tara-pahazavana dia tsy takatry ny "rojo" rehefa miverina ao anaty lava-bato. Miverina miasa ihany koa izy ireo ao amin'ilay lava-bato satria tsy ampiasaina intsony ao amin'ny tontolo schsduw intsony izy ireo ary heverina ho ambany noho ny "rojo".
10 June 2019 ao amin'ny 16: 08
Aza miverina any amin'ny lava-bara.
S0M30N3 nanoratra hoe:
12 June 2019 ao amin'ny 04: 37
Ny fanehoan-kevitra iray dia tsy tonga amin'ny .. miaraka amin'ity rohy youtube ity: https://m.youtube.com/watch?v=_sB5cTocfZM
Misaotra ny zava-drehetra martin, fitaomam-panahy, fanentanana, lahatsoratra mazava, aza kivy ary mitohy.
Fankalazana S0M30N3 - Jeffo
12 June 2019 ao amin'ny 18: 27
Raha te-hanova ny toe-draharaha isika, eto sy izao, dia tokony ho tsapantsika fa ireo ankizilahy ao amin'ny script no manao lalàna, mitarika politika na tsia amin'ny psyops, sns ... izay manimba ny mponina ara-dalàna. Neken'ireo ankizilahy ireo ny anarana holandey tamin'ny fiteny holandey nandritra ny taonjato maro ary mody milaza fa Holandey amin'ny fiainana andavanandro, mba hahatonga ny olo-tsotra holandey ho "holandey". Tsy izy ireo no mahakasika ny 'elit' mpifindrafindra toerana izay mitazona toerana manan-danja ao Holandy ary tsy te handao / tsy handray anjara an-tsitrapo. Raha te-hanova ny toe-draharaha isika, dia tokony handresy lahatra ireo mpifindrafindra monina mpifindra monina mba hiala amin'ny toerana manan-danja ary hiala ao Holandy an-tsitrapo. satria izany no loharanon'ny olana ao Holandy. Raha mahomby amin'ny famelana azy ireo any Holandy an-tsitrapo isika, dia hovana ny toe-draharaha any Holandy amin'ny fomba tsara, tsy fitondrana jadona tsy misy dikany, fifidianana sandoka, vaovao diso, sns., Momba ny olon-tsotra, izay ao anatin'ny fahalianan'izy ireo.
« Peter M. (avy amin'ny rahavavy mahatoky mankany Jeroen Pauw) dia nosamborina indray
Ny fandravana ny fametrahana ny marika 'marina', Trump, Brexit (ary ny zavatra mifandray amin'izany) dia nanomboka »
Total visits: 14.431.281